Home Wararka (Deg Deg) Wadada aadda Hotelkii uu deganaa Gud .Mursal oo gebi ahaanba...
(Deg Deg) Wadada aadda Hotelkii uu deganaa Gud .Mursal oo gebi ahaanba la xiray
Waxaa daqiiqado ka hor lagu soo daadiyay ciidan aad u tira badan isbaarada KM4 iyo wadada aadda garoonka diyaaradçha ee Adan Caddan. Ciidankan ayaa amar ku qaba in aanay gudbi karin xildhibaanada dhinaca garoonka diyaaradaha, waxaana sidoo kale ciidan kale lagu daadiyay jid cadaha iyo jidka loo yaqaan Madina Gate.
Tiro xildhibaano ah oo u socda hotelka uu deggan yahay Gud. Maxamed Mursal aya laga celiyay, waxaana halkaa ka bilowday in ciidankii ilaalada u aha xildhibaanada iyo ciidanka la dhigay wadada ay qoryo isku qabteen.
Nasiib wanaag iyadoo aanay dhicin wax rabshada ah aya xildhibaanada go’aansadeen in ay ka laabtaan si aanay u dhicin dagaalo sababa dhimasho iyo dhaawac.
Waxa laga dareemaya magaalada Muqdisho saan saan dagaal, waxaana bilowday hub uruursi iyo dadka awooda ay guryahooda keensadaan ciidan ilaaliya.
Previous articleBeesha caalamka oo war ka soo saartay dibadbaxyada ka socda Baydhabao (Akhriso)
Next articleSomalia, Eritrea launch new era of military & economic ties
Igad oo ka hadashay go’aan kasoo baxay Dowladda Belgium oo ku...
(Akhriso) Sharciga doorashooyinka maanta la ansixiyay & Farmaajo uu oo 2...